Xaaladda Muqdisho oo maanta ka badalan sidii hore iyo shacabka oo kalsooni isku qaba – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaladda Muqdisho oo maanta ka badalan sidii hore iyo shacabka oo kalsooni isku qaba
Xaaladda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa saakay ah mid aad u degan, xilli labadii maalmood ee ugu dambeysay ay magaalada ka dhacayeen banaanbaxyo aad u ballaaran oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa maanta si caadi ah kusoo noqday, iyadoona maalmihii ugu dambeysay ay magaalada Muqdisho ka dhacayeen banaanbaxyo xamaasad watay oo taageero loogu muujinayay madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka dalka Soomaaliya ugu baaqay inay guryahooda dib ugu laabtaan islamarkaana ay joojiyaan banaanbaxyadda ay isaga ku taageeraayaan, maadaama ay heleen dowladdii ay jeclaayeen.
Dhinaca kale, xarumihii ganacsi ee ku yaalay magaalada Muqdisho ayaa maanta wada furan, waxaana magaalada laga dareemayaa kalsooni dadka shacabka dhexdooda ah, waxaana haatan madaxweynaha cusub ee la doortay laga sugayaa waxyabaaha uu qaban lahaa 100-ka maalmood ee ugu horeeysa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore muddo 8 bilood ah dalka kasoo noqday ra’iisul wasaaraha dowladii KMG ahayd, wuxuuna xilligaasi kasbaday kalsoonida shacabka Soomaaliyeed, taas oo ugu dambeyn keentay in shacabka ay ku farxaan in maanta isaga loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.